Ngalaba igwe tumadi mejupụtara conical twin kposara extruder, agụụ calibrating na jụrụ ikpe, ebupụta-apụ unit, ịcha unit, stacker wdg, dị iche iche dayameta nke ọkpọkọ mkpa iche iche nlereanya nke conical ejima ịghasa extruder na inyeaka igwe.
A na -ejikarị eriri mmepụta GF usoro ọkpọ ọkpọ plastik na -emepụta dayameta dị iche iche na ọkpọkọ mgbidi dị iche iche maka inye mmiri na mgbapụta nke ụlọ na ọrụ ugbo. Nakwa nkwukọrịta eletriki, pavement nke eriri wdg.
PVC anwụrụ ihe nwere nnukwu atụmatụ dị ka ọkụ dị arọ, nzere nzere, isi na-adịchaghị, nhazi dị mfe, na ịrụ ụlọ dị mma.PVC anwụrụ nwekwara ezigbo ike ọdụdụ, ike mkpakọ, na mgbidi ọkpọkọ dị ezigbo ụtọ, nguzogide nke mmiri na-asọba pere mpe, ikike nnyefe mmiri ya karịa otu dayameta nke ọkpọkọ nkedo iji meziwanye 20%. A na -ejikarị ya eme ihe maka ịwụnye ọkpọkọ ọkpọkọ mmiri, ọwa mmiri, ikpochapu na ọkpọkọ nsị mmiri, usoro ọkpọkọ mmiri n'okpuru ala, ọkpọ mmiri ozuzo na ntinye waya nwere eriri ọkpọkọ dabara na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Njirimara na ịrụ ọrụ
Ngalaba igwe tumadi mejupụtara conical twin kposara extruder, agụụ calibrating na jụrụ ikpe, mbuli-apụ unit, ịcha unit, stacker wdg, dị iche iche dayameta nke ọkpọkọ mkpa iche iche nlereanya nke conical ejima ịghasa extruder na inyeaka igwe. Agụụ calibrating ikpe nwere 2- Sistemụ akụkụ jụrụ oyi 3 na-achọ, ma mgbapụta agụụ ma moto na-ebupute etinyerela ngwaahịa dị mma. Ngalaba mbupute etinyela ihe ntụgharị AC mbubata. Igwe a na-ese ihe nwere ụdị mbọ aka abụọ, ụdị mbọ ụkwụ atọ. Ọzọkwa gụnyere ịkpụcha akpaka na ogologo edoziri, ahịrị ahụ niile na -arụ ọrụ ntụkwasị obi, arụmọrụ dị elu yana ọrụ dabara adaba.
Nke gara aga: Ịkwanyere, PVC plastic osisi oghere oghere mmepụta akara
Osote: Single ịghasa Plastic Extruder
Plastic Pipe Ime igwe
Ịkwanyere ntekwasa Ọla kọpa Pipe
Ịkwanyere Gas Pipe
Ịkwanyere Pipe extrusion Machine
Tebụl nhazi 660 （55 kW 、 75KW 、 90KW）
Onye Wpc Extruder, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ, Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Line Wepụ profaịlụ Wpc, Nweta Wpc, Na -akụpịa igwe ihe,